Madaxwaynaha Jabouti Oo Sheegay In Ay Ciidamadiisu Sii Joogi Doonaan Somaliya | Salaan Media
Madaxwaynaha Jabouti Oo Sheegay In Ay Ciidamadiisu Sii Joogi Doonaan Somaliya
Oct 17.2013 Muqdisho(SM) Madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ee qeybta ka ah howlgalka AMSIOM ay sii joogi doonaan Soomaaliya inta ay cagaheeda isaga taagayso, amnigana dib looga soo celinayo,ka dib khudbad uu ka jeediyay munaasabadda ciidul Adxa oo lagu qabtay magaalada Jabuuti.
Madaxweyne Geelle ayaa hambalyo u diiray ciidamada dalkiisa ee ku sugan Soomaaliya ,isagoo ku amaanay waxqabadka iyo dadaalka ay gacanta ku siinayaan dadka Soomaaliyeed ee ay walaalaha yihiin, waxana ugu baaqay inay halkooda ka sii wadaan howshooda ay hayaan.
Madaxweyne ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada iyo tababarada ay siinayaan ciidamada dowlada Soomaaliyeed si ay dalkooda cadowga uga difaacaan.
Madaxweyne geelle ayaa intaas ku daray in howsha ugu weyn ee ciidamadooda ay Soomaaliya u joogaan ay tahay sidii ay uga shaqeyn lahaayeen ammaanka iyo sidii ay u fududeyn lahaayeen howlaha nabadeed ee shacabka.
Madaxweynaha Jabuuti wuxuu sheegay in hanjabaadaha ka imaanaya kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab aysan ka haki doonin howlaha ay ka wadaan soomaaliya, isagoo sheegay in kuwa hanjabaya aysan ahayn iyaga, balse lagu adeeganayo oo kooxo kale ay hanjabaadda waddo.
Dalka Jabuuti ayaa waxaa Soomaaliya kaga sugan hal guuto oo ciidammo ah, kuwaasoo mudo hal sano ah ka howlgalaya deegaanno ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay ku jirto magaalada xarunta ah ee Baladweyne.